SmCo oomazibuthe - China Ningbo Sine
SmCo oomazibuthe aba isizukulwana yesibini iimagnethi esisigxina umhlaba kunqabile, iphezulu-umthamo umazibuthe abasisigxina eyenziwe SM, Co, Fe kunye nezinye izinto umkhondo yesinyithi. Ngaphandle lobushushu max zomsebenzi 300 ℃, oko enokumelana ephawulekayo nxamnye ngokudleka igcwala. Ngenxa yoko, oku kusetyenziswa amashishini aeronautic nesithuba aomng abanye. Silwenza SmCo5 and Sm2Co17 iimagnethi e iimilo ezahlukeneyo. abaxhasi emininzi ifuna amabanga YXG28, YXG30, YXG32, SmCo28, SmCo30, SmCo32, njl Machining kunye nokumelana Thina ...
SmCo ngumazibuthe aba isizukulwana yesibini yehlabathi ezinqabileyo iimagnethi abasisigxina , iphezulu-umthamo umazibuthe abasisigxina eyenziwe SM, Co, Fe kunye nezinye izinto umkhondo yesinyithi. Ngaphandle lobushushu max zomsebenzi 300 ℃, oko enokumelana ephawulekayo nxamnye ngokudleka igcwala. Ngenxa yoko, oku kusetyenziswa amashishini aeronautic nesithuba aomng abanye.
Silwenza SmCo5 and Sm2Co17 iimagnethi e iimilo ezahlukeneyo. Abaxhasi emininzi ifuna amabanga YXG28, YXG30, YXG32, SmCo28, SmCo30, SmCo32, njl
Machining kunye nokumelana
Thina ukufezekisa ubukhulu ntathu kunye nonyamezelwano ngokusika okanye makasilele kunye abrasives super. Samarium ayibe (SmCo) ayikwazi bayisile kunye ukubhola yesiqhelo, sijike okanye amaqela iinkqubo, kwaye kufuneka ngomshini phambi kokuba magnetized. Ukongezelela, iindibano ezinkulu okanye ezintsonkothileyo zidla magnetized phambi ibandla. nokumelana ImiGangatho for Samarium iimagnethi ayibe zezi +/-. 005 "iinkalo emhlabeni. Thina esitokisini SmCo iimagnethi kwibloko, isangqa kunye nefom disc kwiimeko ezininzi ubukhulu kunye amabakala, kwaye baxhotyiswe ngokupheleleyo ukuvelisa ubungakanani kunye nokunyamezela ukuba ufuna.
impahla 5 ingxubevange: 1
1: 5 unika 16 MGOe (imveliso energy) ukuya 22 MGOe kwaye wenziwe nama-50% samarium ne-50% ayibe. I-1: 5 manqaku enzelwe ubuninzi ekucetyiswa lobushushu yokusebenza ka-250 ° C. SmCo 1: 5 iimagnethi ifuna amandla endle ngaphantsi izinto 2:17 ukuze magnetize. Kwezinye iimeko, 1:15 elayibrari ukuba magnetized ngezibonda ezininzi, ukuba ngumnyhadala magnetizing luyafumaneka.
izinto 2:17 ingxubevange
2:17 unikeza 24 MGOe ukuya 32 MGOe yaye ubunjwe malunga-25% samarium, 5% nangobhedu, 18% intsimbi, 2% ചിഹ്നം uphawu okanye zirconium, kunye nokuba ayibe intsalela. I 2:17 uthotho abe lobushushu eliphezulu yokusebenza-350 ° C. amabakala akhethekileyo 2:17 ziyafumaneka leyo ukusebenza ukutshintsha kwamaqondo obushushu. SmCo 2:17 ifuna amasimi eziphakamileyo kakhulu magnetizing, yaye ezininzi ipali magnetization akwenzeki.
Vula kwaye umxokozelo Technical Data of SmCo ngumazibuthe
Property Isizathu Magnetic
SmCo oomazibuthe VS Sintered Neodymium ngumazibuthe
Isiseko Property Magnetic:
iqondo lobushushu yokusebenza lininzi: 250-350 ° C
iphezulu Energy Product: (Bhmax) (15-35 MGOe)
Ubushushu Eyona Working: (Temp.Tw) 250-350
Induction zonyanzelo Force: (Hcb) 4-12 (Koe )
Ubutsalane lentsalela: Br 0.8-1.2 (T)
umva lobushushu ukungavumelani kwe ubutsalane eyintsalela (Br) -0.04 - -0,01
1. Coercity Zintle
2. Nice ubushushu Stability
3. Ngenxa lwamaxabiso uvakalelo of ayibe, ixabiso layo iyabiza kwaye kulula ukutshintshatshintsha
Mveliso Inkqubo Samarium ayibe asisigxina Magnet:
inkqubo Powder → Ukucinezela → Sintering → uvavanyo ipropati Magnetic → ukusika → kweemveliso ezigqityiweyo
Samarium izinto ayibe bavame hlulwa phantsi kweemeko un-magnetized, kunye ivili diamond cuba nokutshixiza zimanzi entle, apho kuyimfuneko. Ngenxa lobushushu ucinezelo ephantsi, akufuneki ngokupheleleyo owomileyo samarium ayibe. Nje ube yintlantsi encinane okanye umbane ezingashukumiyo kwimveliso lula ukuqala umlilo, kunye lobushushu eliphezulu kakhulu, nto leyo nzima ukulawula.
Samarium ayibe oomazibuthe aba krobo. Nceda ukukhusela ngobubele amehlo akho, iminwe nomzimba xa usebenza nabo.
Motors yokusebenza High
yemiqadi yokuhlanganisa Magnetic
Umahluko phakathi iimagnethi SmCo kunye iimagnethi Sintered NdFeB ikakhulu ziquka ezi ngongoma zilandelayo:
1. amandla Magnetic
umazibuthe Neodymium esisigxina unamandla ngaphezu SmCo umazibuthe esebenzayo ngemagnethi.
(BH) Max of NdFeB sintered Kuxhomekeke 53MGOe, ngoxa (BH) Max izinto SmCo yi 32MGOe.
Impahla SmCo unamandla ekuxhathiseni demagnetization ngaphezu eziphathekayo NdFeb.
2. ukumelana lobushushu High
NdFeB ayikho bongamile njengoko SmCo resistance aphezulu obushushu. Iqondo lobushushu eliphezulu olusetyenziswa NdFeB 200 ℃ nokuba of SmCo iyokutsho ku-350 ℃.
3. nokumelana ukumelana
iimagnethi NdFeB azikho kakuhle kangaka ukuxhathisa igcwala umhlwa. Ngokubanzi kufuneka ukhuselwe yi nesingxobo okanye ongenawo nokupaka. Iintlobo Common kusalekwa ziquka zinc, nickel, epoxy kwakunye nabanye. SmCo iimagnethi abayi ukurusa ngaphandle wazaleka.
4. Imilo, ukusetyenzwa Wahlanganisa
NdFeb kunye SmCo bobabini izinto zibuthathaka, ngoko ke asikwazi kuveliswa yi ahlabayo processing zesiqhelo.
Indlela processing jikelele wire-electrode ukusika kunye ukusika wheel nekalikedo. Ngoko ke iimilo producible kwezi umazibuthe inqongopheleyo. Iimilo inzima kakhulu kodwa olusebenzisekayo. Kakhulu ukuthetha, izinto SmCo ulula ngakumbi kwaye lula ngakumbi aphule. Ngoko ke, nceda ulumke kakhulu uzidibanisa nokusebenzisa SmCo iimagnethi.
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, ixabiso SmCo iimagnethi yaba kabini okanye nangaphezu koko of NdFeB ngumazibuthe.
Kwiminyaka yakutshanje, ixabiso NdFeB avuke kakhulu ngenxa amanyathelo ezingqongqo lizwe kwemigodi ezinqabileyo-emhlabeni. Ngokusisiseko, iimagnethi NdFeB eqhelekileyo zitshiphu samarium ayibe.
Previous: AlNiCo ngumazibuthe
Okulandelayo: Sintered Neodymium ngumazibuthe
Ubushushu High Magnet